» डाक्टर बन्न काठमाडौँ छिरेका अधिकारी जेठो बैंकको मुटु छाम्दै
२७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १६:०० प्रकाशित
काठमाडौं – सानोमा इच्छा डाक्टर बन्ने थियो । प्रवेशिका परीक्षा उत्र्तीण गरे पनि बाल वयको सपना पूरा गर्न पाटन संयुक्त क्याम्पसमा विज्ञान विषयमा भर्नाको प्रक्रिया पनि अगाडि बढाए । तर जसलाई क्याम्पस भर्ना गरिदिन भनेका थिए, उनले गरिदिएनन् । सात दिन बायोलोजी पढे पनि डाक्टर बन्ने सपनाको त्यस वर्ष पूर्णविराम लाग्यो ।
‘सपनाको खुड्किलो उक्लिने आधार नबनेपछि कमर्स पढ्न म पिपल्स क्याम्पस हान्निएँ । नियतिले नै पर हुत्यादिएजस्तो लाग्यो । अब मेरा लागि अर्को एउटा सपना थियो जुन विपनामै साकार भएर आएको रहेछ । शङ्करदेवबाट विकम (वाणिज्यशास्त्रमा स्नातक) उत्तीर्ण गरेपछि गाउँकै सेवामा फर्किएँ ।’
नेपाल बैंकको प्रधान कार्यालय भूगोलपार्कको चौथो तलामा आफ्नो जीवन, अध्ययन तथा ‘करियर’का बारेमा खुलेर प्रस्तुत भए, कृष्ण अधिकारी । कुनै समय पार नै लगाउन नसकिने गरी अनगिन्ती समस्यामा जेलिएको नेपाल बैंक कसरी चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्क्यो र अहिले अरू वाणिज्य बैंकजस्तै सफल बैंकका रुपमा स्थापित हुँदै गएको छ भन्ने कुरोको चुरो हामीलाई खोले । एमबिए उत्तीर्ण अधिकारीले १५ वर्ष पुग्यो नेपाल बैंकका सेवा गरेको ।
डाक्टर बन्न काठमाडौँको खाल्डोमा पसेका अधिकारीलाई बैंकर बनाउने अवसर लिएर आयो २०६१ साल । बैंकमा रोजगारीको अवसर खुलेको रहेछ । छैटौं तहमा । परीक्षा दिऊँ, मान्छेहरुले त नेपाल बैंकमा भनसुन पनि चल्छ भन्थे, तर मेरो हकमा भनिदिने त कोही थिएन तर ढुङ्गाको काप फोरेर पीपल उम्रिएझैँ उनी उत्तीर्ण भए । बैंक प्रवेशको समय सम्झँदै अधिकारीले भने, ‘बैंकको काठमाडौँ बैंकिङ कार्यालयमा म छैटौँ तहमा प्रवेश गरेँ । त्यहाँ टे«ड फाइनान्स डिपार्टमेन्टमा म ग्यारेन्टी हेर्थें ।’
करिब ६ वर्ष सोही विभागका काम गरे अधिकारीले । आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सातौँ तहमा पुग्न पनि कुनै समस्या भएन तर सातौँ र नवौँ तहको परीक्षा करिब सँगसँगै भएकाले अधिकारीले छैटौं तहबाट एकैपटक जसो नवौँ तहमा पुगे । नवौँ तहमा पुगेपछि वीरगञ्ज जस्तो औद्योगिक करिडोरमा रहेको बैंकको वीरगञ्ज सिटी अफिसको ब्रान्च मेनेजरका रुपमा काम गर्ने अवसर पाएको सगौरव बताउँछन् अधिकारी । पुनः काठमाडौँ बैंकिङ असफिमा टे«जरी, क्रेडिट हुँदै पुनः शुरुको कार्यालयको प्रमुख भएर बैंकिङ क्षेत्रमा घनघस्याको उकालो चढेका अधिकारी एसिओ, डिसिओ गरी १४ वर्ष १० महिना नियमित कर्मचारीका रुपमा नेपाल बैंकको सेवा गरे । कायममुकायम र पूर्णकालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा काम गरेको एक वर्षमात्रै हुन लाग्यो ।
कुनै समय नराम्ररी समस्यामा फसेको सरकारी लगानीको बैंकलाई नयाँ गति दिने र अरू वाणिज्य बैंकभन्दा सबल र सक्षम बनाउने ध्येय राखेको र सोही अनुसारको गतिविधिसमेत अगाडि बढाएको बताउनुहुने अधिकारी भन्छन्, ‘सफल बन्ने हो भने लोभ नगरौँ, मेहनत गरौँ, एक दिन सफलताको मीठो स्वाद चाख्न पाइन्छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौँको राष्ट्रिय सभागृहबाट अभियान शुरु गरिएको भोलिपल्टदेखि नै नेपाल बैंकले त्यस्तै अभियान चलायो । नयाँ वर्षको अवसर पारेर २०७६ साल वैशाख १ गतेदेखि सो अभियान शुरु भएको हो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी भन्छन्, ‘अरूहरुले भन्दा हामीले नयाँ तरिकाले स्थानीय तहमा जाँदा त्यसले दिएको खुशी शब्दमा नै व्यक्त गर्न नसकिने खालको छ ।’ भन्छन्, ‘हामीले शाखा कार्यालयहरुलाई भन्यौं, शुरुमै खाता खोल्नुस् भन्दै नजानुस्, वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रम बनाउनुस्, बैंकले कस्तो सुविधा दिन्छ, खाता खोल्दाको फाइदा के हुन्छ भनेर बुझाउनु, स्थानीय नागरिक आफैँ खाता खोल्न तयार भइहाल्छन् ।’
सबै नेपालीको बैंक खाता हुनैपर्छ । देशको जनसङ्ख्या तीन करोडको हाराहारीमा पुगेका छ । त्यसमा खाता खोल्नयोग्य व्यक्ति कति हुन् भन्ने बारेमा स्पष्ट पहिचान गर्नु जरुरी छ । अभियान नियमितरुपमा नै चलाउनुपर्छ । त्यसले नागरिक र बैंकबीचको सम्बन्ध स्थापित हुँदै जान्छ । त्यसले पनि बैंकको क्षेत्र थप विस्तार हुँदै जान्छ । सशस्त्र द्वन्द्वअघि नेपाल बैंक देशभर नै पुगेको थियो । शाखा सङ्ख्यामात्र २१४ थिए । त्यो घट्दै ९६ मा सीमित भयो । शान्ति प्रक्रियापछि शाखा सङ्ख्या बढ्दै पुनः हाल १७७ मा पुगेको छ । पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जन्मदिनका अवसर पारेर सक्रान्ति बजारमा शाखा पुनस्र्थापना गरिएको छ । पहिलेकै अवस्थामा पुग्न अझै ३७ शाखा विस्तार गर्न बाँकी छ ।
अधिकारीले भने, ‘चालू आवको अन्त्यसम्म २०० शाखा पु¥याउने योजना छ । सम्भाव्यता भएका सबै क्षेत्रमा हामी पुग्छौँ । हामी सरकारी बैंक भएकाले पनि नागरिकलाई सरल र सहज बैंकिङ सेवा पु¥याउने हाम्रो दायित्व हो ।’ विगतमा केही व्यवसाय नभएर पनि शाखा विस्थापित भए, केही असुरक्षाका कारणले पनि हटे । नयाँ योजना सुनाउँदा अधिकारीले सुनाए, ‘यस वर्ष हामी प्रदेश नं १ को रविबजार, वसन्तपुरमा नयाँ शाखा खोल्छौँ । काठमाडौँमा भाटभटेनी, नयाँ बजार, इमाडोल, बूढानीलकण्ठलगायत छ स्थानमा नयाँ शाखा खोल्दैछौँ । गाउँ, शहर दुवै हाम्रो प्राथमिकतामा छ ।’
कारोवार अपेक्षित रुपमा कम भए पनि दायित्व सम्झेर ती स्थानमा जाने र सोही अनुसार प्रादेशिक कार्यालयलाई समेत निर्देशन गरिएको छ भन्छन्् अधिकारी । ‘हामीले शाखा कार्यालयलाई भनेका छौँ, बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित भएका ठाउँहरु खोज्नुस् । अब यसको मतलब निरन्तर घाटा सहने भन्ने त होइन । हामीमा पनि व्यावसायिकता आउनैपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘हाम्रा पनि सीमा छन् । शेयरधनी छन् । राज्यले पनि प्रतिफल खोज्छ, सेवा र व्यवसाय हाम्रा दुई प्रमुख क्षेत्र नै हुन् । व्यावसायिक सम्भाव्यता छ भने जान्छौँ ।’
बैंक वित्तीय संस्था पैसा हुनेका लागिमात्र भए र हुने गरेका छन् भन्ने गुनासो छ । सामान्यतयाः त अवस्था पनि त्यस्तै देखिन्छ । बैंक त पैसा हुनेका लागि मात्रै भए भन्ने आम गुनासो छ । सर्वसाधारण नेपालीलाई बैंक हुनु र नहुनाको कुनै अर्थ छैन, भुक्तभोगी यसै भन्छन् । हाम्रो जिज्ञासा अधिकारीसँग पनि यस्तै थियो । उनले कुनै समय नै नदिई भने, ‘हाम्रो हकमा त्यो लागू हुँदैन । हामीले सरकारले ल्याएको सहुलियतपूर्ण कर्जालाई विशेष प्राथमिकतामा राखेका छौँ । हामी पहिलो बैंक भएकाले हाम्रो योगदान अरूको भन्दा फरक हुन्छ नै ।’
कुनै समय नेपाल बैंकमा कारोवार गर्न नै समस्या जस्तो लाग्थ्यो । कर्मचारी कुनै अर्कै संसारबाट झरेका जस्ता छन् भन्ने गुनासो हुन्थ्यो सेवाग्राहीको तर पुराना ढड्डा पल्टाउने जमानाको बैंकलाई अहिले धेरै आधुनिकीकरण गरिएको छ । अरू निजी क्षेत्रका बैंकभन्दा कुनै अर्थमा कमजोर छैन भन्छन् प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारी । ‘अधिकांश सरकारी निकायका काममा ढिलासुस्ती हुन्छ, उनीहरु ग्राहकमैत्री हुँदैनन् भन्ने सोचलाई हामीले पूर्णरुपमा बदलेका छौँ । ‘दश वर्षपहिले त्यस्ता सोच राख्नेहरु थिए होलान्’, अधिकारीले भने, ‘यो बैंकको सबैभन्दा बुढो कर्मचारी अब म मात्रै हो । एकाध बाँकी होलान् । युवा, केही नयाँ गरौँ भन्ने सोच भएका कर्मचारी भर्ना गरेका छौँ जसका कारण नेपाल बैंकलाई अरू व्यावसायिक बैंकभन्दा अब्बल बनाउन सकेका छौँ ।’
कुनै समय टोकन लिएर बजार घुमेर आउँदा पनि पालो नआउने अवस्था थियो । ग्राहकलाई बैंकिङ कारोवार गर्न गाह्रो थियो । गुनासोका चाङ हुन्थे । सेवाग्राहीका असन्तुष्टिको पहाड हुन्थ्यो । यो विगतको कुरा हो, अधिकारी यसै भन्छन्, ‘आज यस्तो अवस्था कहीँकतै छैन, भए पनि त्यसलाई सुधार गरेर जान अधिकतम प्रयास गरेका छौं ।’ एमबिए स्कलर अधिकारी भन्छन्, ‘पछिल्लो दिनमा वातावरण पूर्णरुपमा परिवर्तन भइसकेको छ । कारोवार गरेर हेर्दा हुन्छ । मेरो आग्रह यही छ ।’
बैंकमा युवा जनशक्ति भएकाले आन्तरिकरुपमा पनि प्रतिस्पर्धा छ, कसले राम्रो गर्ने भनेर । सेवा क्षेत्र हो बैंक । उपभोक्तालाई कसरी खुशी बनाउने भन्नेतर्फ नै हाम्रो ध्यान छ । सबैको इच्छा त पूरा नहोला तर सकेसम्म गर्ने प्रयासमा नै छौं, हुने कामलाई सहजै गर्छौं, नहुने भए, यसकारण हुँदैन भनेर सम्झाएर पठाउँछौं । पछिल्ला दिनमा आएका ग्राहकको धारणा बदलिएको छ । उनीहरु भन्छन्, ‘बैंक परिवर्तन भएछ हामी त पुरानै नजरले हेरिरहेका थियौँ । बैंकको पछिल्ला सेवा हेर्दा अरू बैंक पुराना भएकी भन्ने अवस्था आएको छ ।
विगतमा बैंकसँग कारोवारको दिगो सम्बन्ध जोडेकाहरु समेतले बीचमा छाडे तर अहिले फर्केर आएका छन् । ‘आमा जति नै नराम्री भए पनि आमा आमा नै हुन्’, अधिकारी बैंकलाई पनि आमासँग तुलना गर्नुहुन्छ र भन्छन्, ‘नेपालको व्यावसायिक र बैंकिङ क्षेत्रका लागि त नेपाल बैंक आमा नै हो ।’
देशमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यहाँ हाल २७ वटा त वाणिज्य बैंक नै छन् । नेपाल बैंक किन आउने ग्राहक ? हाम्रो प्रश्न थियो । ‘नेपाल बैंकसँग कारोवार गर्नु भनेको नेपालको पहिलो बैंकसँग सम्बन्धित छु भन्ने गर्वको महसुस हुन्छ । नेपाल देशसँगको नाम जोडिएको बैंकसँग सम्बद्ध छु भन्ने अनुभव गर्नु पनि हो, यहाँ जुन काम हुन्छ स्वच्छ हुन्छ, पारदर्शी हुन्छ । प्रणालीअनुसार काम हुन्छ भन्न पाउने गरी ग्राहकमैत्री वातावरण पनि हामीले बनाएका छौँ ।’
कुनै कालखण्डमा आर्थिक अवस्था कमजोर भएर, खराब अवस्थामा पुगेर पुनः रिभाइभ भएको नमीठो इतिहास पनि छ बैंकको । दुःखका शरदकालीन रातहरु मात्रै होइन, वसन्तका न्यायो घाम पनि देखेको छ बैंकले । निजी क्षेत्रका बैंकहरुले स्प्रेड दर कसिरहेको बेला नेपाल बैंकको ४.५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । यो अन्य बैंकको तुलनामा असाध्यै कम हो । अरू बैंकले जस्तै स्प्रेड ५.५ वा सोभन्दा बढी बनाएको भए नाफा रु एक अर्बमाथि सोझै हुन्थ्यो तर आफूहरुले नाफा मात्रै नहेरेको अधिकारी दाबी गर्छन् ।
निक्षेपकर्तालाई पनि बैंकले राम्रै व्याज दिएको छ । बचत खातामा ६ प्रतिशत व्याज पाउने ग्राहकले मुद्धतिमा ९.७५ प्रतिशतसम्म व्याज पाउँछन् । कर्जाको ग्राहक भए न्यूनतम व्याजमा पाएका छन् । ‘हामी नेपाल सरकारप्रति उत्तरदायी छौँ, सर्वसाधारणप्रति हाम्रो जिम्मेवारी छ । तत्कालका लागि होइन, हामीले दीर्घकाललाई हेरेका छौँ’, अधिकारी बैंकको रणनीति सुनाउँदै भन्छन्, ‘आम मानिसले सहज र सरल ठान्ने सेवा दिएका कारण पनि ग्राहक नेपाल बैंकमा आउनुहुन्छ । मेरो पूर्ण विश्वास छ ।’
बैंकले कमाएको कूल नाफामध्ये ५१ प्रतिशत राज्यलाई जान्छ, ४९ प्रतिशत सर्वसाधारणलाई जान्छ । राज्यलाई दिएको त घुमीफिरी सर्वसाधारणमा नै आउँछ । विलाशिताका लागि सवारीसाधन खरिद गर्नुप¥यो भने सहजै ऋण दिने बैंक तथा वित्तीय संस्था उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न मान्दैनन्, किन होला ? उनको जवाफ छ, ‘नेपाल बैंकमा यो कुरा लागू हुँदैन । हामीले सवारीसाधन कर्जालाई कडाइ गरेका छौँ । कुनै पोर्टफोलियोमा कम र बढी त हुन्छ नै तर उत्पादकत्व बढाउने क्षेत्रमा नै हामी बढी केन्द्रित छौँ ।’
उत्पादनमकूलक काम हो भने कर्जा दिने, तर घर जग्गा राखेर, विलाशिताका लागि मात्रै हो भने त्यसमा तयार नहुने रणनीतिमा छ बैंक । अधिकारीको प्रस्ट भनाइ छ ‘त्यसलाई ‘डिस्करेज’ नै गर्ने हो ।’ बैंकको प्रमुख प्राथमिकता कृषि, पर्यटन, जलविद्युत् र साना तथा मझौला कर्जा हुन् । अरू बैंकले जस्तो होडबाजीमा विलाशिताका वस्तुमा हुने लगानीलाई प्रोत्साहित नगर्ने नीति छ यो बैंकको । ‘हामी बरु नेपालभरिकै सानो हुन चाहनछौं तर आफ्नो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध छौँ । हामीले राम्रो गर्दागर्दै पनि अरूले झन् राम्रो गरे भने त्यो त झन् राम्रै भयो नि’, आफ्नो परिवारकै पहिलो बैंकर रहनुभएका अधिकारीले भने, ‘लक्ष्य त आफूले न तय गर्ने हो, अन्धनक्कल गरेर होडबाजी गर्ने योजनामा बैंक छैन ।’ प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रीय बैंकले तोकेकोभन्दा बढी लगानी गरेको छ बैंकले । कृषि, पर्यटनमा त १७ प्रतिशतको लगानी छ । जबकि राष्ट्र बैंकले १५ प्रतिशत मात्र लगानी गर भनेको छ । ऊर्जामा पनि उत्तिकै लगानी छ ।
कुनै बेला ६० प्रतिशत एनपिए बुक गरेको बैंकको अहिले २.६६ प्रतिशतमात्र छ । धेरै व्यवस्थापन भएको छ । अझै केही त बाँकी नै छ । कुनै ‘रिभाइभ’ गरिएको छ भने केहीलाई ‘रिकभरी’मा पनि लगिएको छ । मजदूरको अनावश्यक मागका कारण बन्द भएको पोखराको फूलबारी रिसोर्टलाई समय दिएर रिभाइभको अवस्थामा लगिएको छ । नयाँ वर्षका अवसरमा सो रिसोर्ट पुनः सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । बैंकले केही समय पहिले स्थापनाको ८३ वर्ष मनायो । ‘२०३५ सालतिर दिएका केही ऋण भने उठाउन बाँकी नै छ । केही ऋणी छन्, त्यसलाई छिमल्न लागिपरेका छौं, अधिकारीको विश्वास छ । त्यसमा पनि हामी लागिपरेकै छौँ ।
शेयरधनीले बैंकबाट प्रतिफल पाउन पनि लामो समय कुर्नुप¥यो । २३ वर्षपछि बैंकले २५ प्रतिशत लाभांश दियो । ‘नेपाल बैंक भएर धैर्यता राख्नुभएको हो । बैंकले दिन त सकेको छैन तर यसको सम्पत्ति त यत्ति छ नि भन्ने थाहा पाएर नै उहाँहरु चुप लाग्नुभएको हो । उहाँहरुप्रति हामी अनुग्रहित छौँ’ अधिकारी शेयरधनीलाई सम्मान गर्दै भन्छन्, ‘हामी ग्राहकको विश्वास बढाउउँछौ, टुटाउँदैनौँ ।’
व्यवसाय विस्तारमा बैंक लागेको छ । शेयरधनीलाई एकैनासको लाभांश दिनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिएको छ । ‘हाम्रा शेयरधनीलाई अहिलेको जति नै दिन सक्यो भने कामले सार्थकता पाउँछ,’ अधिकारीले संवादलाई बिट मार्दै भने, ‘दीर्घकालीन लक्ष्यका साथ काम गरेका छौँ । सोच राम्रो राखौँ, इमान्दार बनौं, सफलता एक दिन हासिल भई नै हाल्छ ।’